आत्महत्यापछि दुई जना पक्राउ,तस्वीर देखाएर ब्ल्याकमेलिङ | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति १३ फाल्गुन २०७६, मंगलवार २०:३७ लेखक नेपाली जनता
विराटनगर । विवाहित महिलालाई आत्महत्या गर्न बाध्य बनाएको आरोपमा मोरङ प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा सुन्दरहरैचा ६ बस्ने १९ वर्षीया संजिता निरौला र सुन्दरहरैचा ४ बस्ने ऋषिराम भट्टराई छन् । उनीहरुले मोरङको सुन्दरहरैचा नगरपालिका–५ बस्दै आएकी प्रीति तिम्सिना अधिकारीलाई आत्महत्या गर्न बाध्य पारेको आरोप छ ।
८ फागुनमा प्रीतीले आत्महत्या गरेको खबर पाएपछि पुगेको प्रहरीले सुसाइट नोट फेला पारेको थियो । सुसाइट नोटमा दुई वटा फेसबुक एकाउन्टबाट नग्न तस्वीर देखाएर आफूलाई ब्लाकमेलिङ गरेको उल्लेख थियो ।
अनुसन्धानका क्रममा ड्याजलिङ क्वीन र दीपा नाम गरेको फेसबुक आइडीबाट नग्न तस्वीर प्रीतिको म्यासेन्जरमा पठाएर पैसा नदिए भाइरल बनाइदिने डर देखाइएको पाइएको थियो । फेसबुक आइडी चलाउने व्यक्तिको खोजी गर्ने क्रममा प्रहरी ऋषिरामसम्म पुग्यो ।
प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा भट्टराईले एक वर्षयता नग्न तस्वीर देखाएर पैसा असुल्दै आएको स्वीकार गरे । पैसा लिन भने उनले सञ्जितालाई प्रयोग गर्दै आएका थिए ।
प्रीतिले आत्महत्या गर्नुअघि पनि भट्टराईले पैसा नदिए फोटो भाइरल गरिदिने धम्की दिएका थिए । तर उनीसँग पैसा थिएन । मागेजत्ति पैसा दिन नसक्ने भएपछि उनले आत्महत्याको बाटो रोजेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारीले सुसाइट नोटका आधारमा पक्राउ परेका दुई जनाविरुद्ध आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दामा अनुसन्धान सुरु गरिएको बताए ।
प्रीतिका श्रीमान केही वर्षअघि वैदेशिक रोजगारीमा थिए । अनुसन्धानको क्रममा मृतक र पक्राउ परेकाहरु बीच चिनजान भएको देखिएको प्रहरी बताउँछ ।
सभागृह निर्माणमा ढिलाइ
बाँके । ‘बहुउद्देश्यीय सभागृह र प्रदर्शनीस्थल’ निर्माणको मुद्दा अघि सारेर नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले हरेक बर्ष महोत्सव आयोजना गर्ने…
‘सम्मान दिएर ओलीलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने मोदीको रणनीति, नेपालको खोलामा आँखा’
काठमाडौं । नेपालमा प्रभाव बढाउन भारत र चीनबीच प्रतिस्पर्धा चलिरहेका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जलविद्युत् परियोजनाहरू भारतबाट खोसेर चीनलाई नदिन…
१४ पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले मच्चाएको काण्डको पर्दाफास
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका १४ पूर्वप्रधानन्यायाधीशले नियमविपरीत सरकारी गाडी सुविधा प्रयोग गर्दै आएका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको…
१६ वर्षिया बसन्ता र सिता पाँच दिनदेखि बेपत्ता
काठमाडौं । कपिलवस्तु वाणगंगा नगरपालिका–९ भलवाडकी १६ वर्षीया किशोरी बसन्ता बन्जाडे विगत पाँच दिनदेखि बेपत्ता भएकी छन् । बसन्ताकी…
उपकुलपतिले घुस लिए, भतिजाले राखे
काठमाडौं । बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका उपकुलपति डा. राजकुमार रौनियारले घुस बापत आठ लाख रुपैयाँ आफैले बुझेका…
२२ जिप समितिबाट हटाइयो
सल्यान । सल्यानमा पाँच सिट क्षमता भएका २२ वटा जिप समितिबाट हटाइएको छ । सल्यान रुकुम यातायात व्यवसायी समिति…
काठमाडौं क्षेत्र नं १ का प्रदेश सभा सदस्य दिपेन्द्र श्रेष्ठको भिडियो सर्वाजनिक, काठमाडौंका जनताले खानेपानी पाएन ? 24 views